Gnu / Linux | ဖိုင်နှင့်လမ်းညွှန်ခွင့်ပြုချက်များကြောင့်လုံခြုံရေးကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်နည်း မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Gnu / Linux တွင်ဖိုင်နှင့်လမ်းညွှန်ခွင့်ပြုချက်များကြောင့်လုံခြုံရေးကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်နည်း
Joaquín Garcia က Cobo | | လဲ tutorial
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Gnu / Linux operating system များသည်၎င်းတို့၏အသွင်အပြင်ကိုများစွာပြောင်းလဲစေခဲ့သည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော user များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၎င်းကို cold terminal console မှတဆင့်သာ desktop (သို့) graphical screen မှလုပ်ဆောင်ရန်များစွာသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုခွင့်ပြုသည်။
သို့ရာတွင်ဂရပ်ဖစ်ပုံစံနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိတ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းတို့၌မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသိရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အသုံးဝင်သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကိရိယာများရှိသည်။ ဒါကဖြစ်ရပ်မှန်ပါ သုံးစွဲသူများနှင့်အုပ်စုများအတွက်ခွင့်ပြုချက်Gnu / Linux တွင်ပါ ၀ င်သောစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာများအတွက်လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။
အခြား operating system များစွာတွင်၎င်းတို့ရှိနေသကဲ့သို့ Gnu / Linux တွင်အချို့သောဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများဖြစ်နိုင်သည် အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်ကန့်သတ်နိုင်သည် သို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်အချို့သောအသုံးပြုသူများအတွက်သာရရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤကိစ္စတွင်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အုပ်စုများနှင့် ပို၍ ပို၍ တူသည်၊ ထို့ကြောင့်တူညီသောလည်ပတ်မှုစနစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူအမျိုးအစားများစွာရှိနိုင်ပြီးအချို့အခွင့်ထူးများ (သို့) အချို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များအားအသုံးပြုသူအချို့အုပ်စုများသို့အခြားသူများအားပေးအပ်နိုင်သည်။
မည်သည့် Gnu / Linux system တွင်မဆိုဖိုင်နှင့်ဖိုင်တွဲအားလုံးတွင်ခွင့်ပြုချက်သုံးမျိုးရှိသည်။ ခွင့်ပြုချက်ဖတ်ပါ၊ ခွင့်ပြုချက်ရေးပါ၊ ခွင့်ပြုချက်ကိုဆောင်ရွက်ပါမရ။ ငါတို့မှာဖတ်ခွင့်ရှိတဲ့ဖိုင်တစ်ခုရှိရင်ငါတို့ဖိုင်ကိုဖတ်ပြီးကြည့်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုမွမ်းမံလို့မရဘူး၊ အဲဒါကိုကွပ်မျက်လို့မရဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွပ်မျက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိလျှင်ဖိုင်ကိုစီမံကွပ်မျက်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုမမြင်ရသို့မဟုတ်မပြုပြင်နိုင်ပါ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ငါတို့မှာခွင့်ပြုချက်ရှိရင်ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကိုငါတို့ပြုပြင်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဖတ်နိုင်၊ ကွပ်မျက်လို့မရဘူး။
ဤရွေးချယ်မှုသုံးမျိုးကိုလုံခြုံရေးစနစ်တစ်ခုအနေနှင့်သုံးနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် operating system ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး မှလွဲ၍ အခြားအရာများဖြင့်မပြုပြင်နိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာစီမံခန့်ခွဲသူသည် system files များကိုသာပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်၊ ၎င်းသည်ဤဖိုင်များကိုအသုံးပြုသူများမှလုပ်ဆောင်သော program များနှင့် system files များကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ ငါတို့သည်လည်းဖိုင်များကိုသုံးခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရေးကြီးဖိုင်များရှိလျှင်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လည်းစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်လျှင်၎င်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ငါတို့ကတစ်ချို့ဖိုင်တွေကိုလက်လှမ်းမမီနိုင်သလိုလုပ်ဖို့ခက်သလောက်လုပ်နိုင်တယ်.
Gnu / Linux တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူအုပ်စုများအားခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည်လူတစ် ဦး သို့မဟုတ်အများဆုံးနှစ်ယောက်သာအများဆုံးအသုံးပြုသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖွဲ့များအတွက်အလွန်အသုံး ၀ င်ပုံမပေါ်သော်လည်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်တင်များတွင်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးအရေးကြီးသည်။ network နှင့် system administrators များစွာသည်ဤ Gnu / Linux feature ကိုသုံးသည် Linux အဖွဲ့များကိုဌာနတစ်ခု (သို့) လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပေါင်းသင်းပါထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူတစ် ဦး သည်ဌာနတစ်ခု (သို့) အချို့သောလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ရှိနေနိုင်ပြီး၎င်းသည်သူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ င်ရောက်နိုင်မည့်အုပ်စုတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်သည်။ ၎င်းသည်ကုမ္ပဏီ၏ငွေကြေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုရိုးရှင်းစွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ငါတို့မှာတီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းနည်းနည်းရှိရင်အလားအလာအများကြီးရှိတယ်။
Gnu / Linux ဖြန့်ဖြူးမှုအားလုံးတွင်ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတွေ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် ဂိတ် (သို့) ဂရပ်ဖစ်မှတဆင့်မရ။ ငါတို့ကဖြန့်ဖြူးတာနဲ့ငါတို့သုံးတဲ့ဖိုင်လ်မန်နေဂျာပေါ်မူတည်ပြီးကွာခြားတာကိုပြောဖို့လိုပေမယ့်လည်းအဲဒါတွေအားလုံးလုပ်ရတာလွယ်တုန်းဘဲ။
Terminal မှတဆင့်ခွင့်ပြုချက်ပြောင်းခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရမည့်အရှုပ်ထွေးဆုံးအရာသည်သိရန်ဖြစ်သည် သက်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်များသတ်မှတ်ရန်ကွဲပြားသောကုဒ်များ.
ရသောအခါ ငါတို့စာရင်း (သို့) အချက်အလက်ရှာကြည့်ရအောင် ဖိုင်တစ်ခုတွင်အောက်ပါနှင့်အလွန်တူသောကုဒ်တစ်ခု terminal တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဤကုဒ်ကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းသည်ဖိုင် (-)၊ လမ်းညွှန် ()) သို့မဟုတ်သင်္ကေတ link (l) ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားပြောသောပထမအက္ခရာကိုဖယ်ရှားရမည်။ ရလာဒ်ကုဒ်ကိုအက္ခရာသုံးလုံးအုပ်စုများ ခွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့သုံးပိုင်းခွဲပေးလိမ့်မည်။
ပထမအပိုင်းကဖိုင်ပိုင်ရှင်ကစာရွက်စာတမ်းနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြတယ်။ ဒုတိယအုပ်စု၏ဇာတ်ကောင်ကအသုံးပြုသူအုပ်စုသည်ဤဖိုင်အတွက်ဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြီးနောက်ဆုံးဇာတ်ကောင်အုပ်စုသည်ပိုင်ရှင်မဟုတ်သလိုတူညီသောအသုံးပြုသူအုပ်စုနှင့်မလုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်။ အက္ခရာအုပ်စုသုံးစုတွင်၎င်းကိုဖတ်နိုင် (r)၊ ကွပ်မျက်ခံရ (သို့) ပြုပြင်ထားသော (w) ဟုပြောနိုင်သောစာများကိုငါတို့တွေ့လိမ့်မည်။
ကဲ၊ ငါတို့ကစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုပြောင်းချင်တယ်လို့စိတ်ကူးကြည့်ရအောင်။ ငါတို့အဲဒါကို terminal ကနေလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲဒါကိုငါတို့သတ်မှတ်ချင်တဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ခွင့်ပြုချက်များကိုပြုပြင်ချင်တဲ့ဖိုင်ရဲ့နောက်မှာ chmod command ကိုသုံးရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ဖိုင်ကိုဖတ်နိုင်၊ ရေးသားနိုင်စေလိုလျှင်အောက်ပါကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါတို့လုပ်ချင်တာကဖိုင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကကွပ်မျက်နိုင်ရင်၊ ငါတို့ရေးရမယ်။
ငါတို့လိုချင်တာကဖိုင်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကဖတ်နိုင်၊ ပြုပြင်ပြီးကွပ်မျက်နိုင်လျှင်၊ အောက်ပါကုဒ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရန်လိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အုပ်စုများနှင့်အခြားသူများနည်းတူဤနည်းအတိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ အပြောင်းအလဲတွေကိုအခြားသူတွေနဲ့သက်ရောက်မှုရှိစေချင်ရင်တော့၊ အရင်ကုဒ်ရဲ့ပထမအက္ခရာကို G ပြောင်းရမယ်။ terminal ကိုသုံးသောအခါအုပ်စုအားရည်ညွှန်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောအုပ်စုဖြစ်ပြီးအခြားသူများနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မပိုင်သောသူများဖြစ်လိမ့်မည်။
terminal နှင့်ခွင့်ပြုချက်ပေးရန်ပိုမြန်သည့်နည်းလမ်းလည်းရှိသည်။ ဒီနည်းမှာတူညီတဲ့ command ကိုသုံးပြီးပါဝင်ပေမယ့်ခွင့်ပြုချက်တွေကိုဖွင့်ဖို့ငါတို့နံပါတ်တွေကိုသုံးမယ်။ စာဖတ်ခြင်းအတွက်နံပါတ်သည် ၄၊ စာရေးခြင်းအတွက်နံပါတ်သည် ၂ ဖြစ်ပြီးလုပ်ဆောင်ရမည့်နံပါတ်မှာ ၁ ဖြစ်လိမ့်မည်မရ။ နံပါတ်တစ်လုံးစီသည်အက္ခရာများကိုကိုယ်စားပြုသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသူ၊ အဖွဲ့နှင့်အခြားသူများ၏ခွင့်ပြုချက်ကိုလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ငါတို့သုံးတဲ့ဂဏန်းကအဲဒီခွင့်ပြုချက်ရဲ့ဂဏန်းတွေဘဲ။ ၎င်းသည်ကုဒ်ကိုကြည့်သောအခါဤအရာသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်။
ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူအားအပြည့်အ ၀ ခွင့်ပြုသည် (၎င်းသည် ၄ ​​+ ၂ + ၁ ကိုပေါင်းခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်သည်)၊ ဒုတိယ ၇ သည်အုပ်စုများနှင့်ပတ်သက်သောခွင့်ပြုချက်များဖြစ်ပြီး ၆ သည်အခြားသူများနှင့်သက်ဆိုင်လိမ့်မည် (၄ + ၂ နှင့် ၀) execution တွင်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ )
ဖိုင်မန်နေဂျာများနှင့်ဖိုင်တွဲများတွင်ခွင့်ပြုချက်အပြောင်းအလဲများသည်ဖိုင်လ်မန်နေဂျာအားလုံး၌၎င်းနှင့်ဆင်တူသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကုဒ်များမှတဆင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲရွေးချယ်စရာအားလုံးပါ ၀ င်သော drop-down menus များမှတဆင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ဒီလိုလုပ်ဖို့ငါတို့ကသူ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုပြုပြင်ချင်တဲ့ဖိုင် (သို့) ဖိုင်တွဲကိုရွေးရမယ်။
ငါတို့ကအဲဒါကို right-click လုပ်ပြီး "Properties" ကိုသွား၊ မျက်နှာပြင်မှာ "ခွင့်ပြုချက်" ဆိုတဲ့ tab တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်၊ အဲဒီကိုသွားပြီးငါတို့အဲဒီဖိုင်ရဲ့လက်ရှိခွင့်ပြုချက်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်။ မင်းလုပ်ရမှာကငါတို့ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစားတစ်ခုစီမှာငါတို့လိုချင်တဲ့ option ကိုရွေးတာဒါပဲ။
system file တစ်ခုရဲ့ခွင့်ပြုချက် (သို့) ငါတို့ခွင့်ပြုချက်မရတဲ့ဖိုင်တစ်ခုကိုပြောင်းချင်ရင်၊ ငါတို့လုပ်ရမယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်လုပ်ပါစနစ်ခွင့်ပြုချက်အားလုံးရထားသောအသုံးပြုသူ ဖိုင်များကိုစီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ်ဖွင့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်မန်နေဂျာအမည်ဖြင့် sudo command ကို execute လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤအရာသည် Gnu / Linux ရှိဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွင့်ပြုချက်နှင့်အခွင့်အရေးများကိုထိန်းချုပ်ရန်နည်းလမ်းများဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အသုံးပြုမှုသည်အမှန်တကယ်အလွန်အသုံးဝင်သည် လုံခြုံရေးကိရိယာတခုဖြစ်တယ် အလွန်အခမဲ့ထိရောက်သောသုံးစွဲသူများသည်သူတို့ရရှိနိုင်သောအရာကိုသိသောကြောင့်အလွန်ထိရောက်သည်။ ဒါဆိုငါတို့ရဲ့ operating system မှာအရမ်းအရေးကြီးတဲ့အဲဒီဖိုင်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့အခုအချိန်ကိုအခွင့်ကောင်းယူတာထက်ပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကဘာလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » လဲ tutorial » Gnu / Linux တွင်ဖိုင်နှင့်လမ်းညွှန်ခွင့်ပြုချက်များကြောင့်လုံခြုံရေးကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်နည်း
Instagram တွင်အခြားသူများကို unfollow လုပ်နည်း
၂၀၂၁ တွင် Nintendo Switch ကို ၀ ယ်ရန်ထိုက်တန်သနည်း။